အင်တာနက် — Kiddo Monster™
အင်တာနက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတွေမြင်ကြတာက Facebook ပဲရှိတော့တာလားဆိုတာ မရေရာတော့ဘူး။ ဒီကြားထဲမှာ Telecom တွေဖြစ်ကြတဲ့ MPT, Ooredoo, Telenor တွေကလဲ Internet Package ထဲမှာ စျေးအနည်းဆုံးကတော့ Facebook ပဲဖြစ်နေတော့တာပဲ။
Internet ကိုဘာကြောင့်သုံးလဲ ?
အဓိက အကြောင်းအရာရယ်လို့တော့မဟုတ်ပေမယ့် အင်တာနက် သုံးတယ်ဆိုတာ အသိပညာတွေ ဗဟုသုတတွေတိုးချင်လို့သုံးတာဆိုရင်မှန်လိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုထဲမှာ Facebook က စျေးအနည်းဆုံးပဲဆိုတော့ Facebook ပေါ်မှာပဲ တက်ပြီး ပိုက်ဆံတွေကို ဖြုန်းတီး နေတာပဲလို့မြင်မိတယ်။
ဗဟုသုတဆိုတာကလဲ ဘယ်မှာနေတယ်မသိ စိတ်အနှောက်အယှက်တွေ လူ့ငပိန်းတွေ အများအပြားရှိ။ တစ်ဖက်ပိတ်မှန်းမသိ ပိတ်နေတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိနေတော့ ဗဟုသုတသီးသန့် Sharing လုပ်တဲ့ Website တွေအများကြီးကို လေ့လာချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ အပေါ်မှာပြောသလိုပဲ စျေးအနည်းဆုံးကို အများဆုံးသုံးပြီး အချိန်တွေကို အများဆုံးဖြုန်းတီးနေမိတော့ပါပဲ။
ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ လေ့လာချင်တာလဲ ?
ဘယ်လိုနေရာတွေဆိုတာထက်ကို ပိုက်ဆံဆိုတာ အရမ်းကြည့်ရတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်တော့ ရွေးချယ်ခွင့်ဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ Youtube လို Website တွေအတွက်ကတော့ 1 MB ကို ၄ ကျပ်ကနေ ၈ ကျပ် အမျိုးမျိုးရှိတော့ အနားကို ကြာကြာမကပ်နိုင်ဘူး။ စွယ်စုံ ဗဟုသုတလဲ မတိုးတော့ဘူးပေါ့လေ။ အရေမရ အဖတ်မရတွေအတွက်ပဲ ပိုက်ဆံကုန် သက်သာတာဆိုလေတော့လဲ Facebook သုံးပါ အချိန်ဖြုန်းပါ ပိုက်ဆံဖြုန်းပါဆိုသလိုဖြစ်နေပြီ။ Internet Service Provider တွေအများကြီးဘာလို့မသုံးရတာလဲ မေးနိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေအတွက် အဖြေကတော့ နေတဲ့နေရာက ဇေယျာသီရီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ကံကိုအကြီးကြီးဆိုးတာလို့ပဲ ပြောလို့ရတော့မယ် “သည်းခံ” အကြောင်းဖတ်ပြီးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ သိပြီးသားကိစ္စတစ်ခုပဲဖြစ်နေတော့မှာပေါ့လေ။
ဒီကြားထဲ နားထဲသဲ့သဲ့ ကြားလိုက်တာတစ်ခုကတော့ Internet Package တွေကို စျေးပေါပေါပဲပဲ မထားရပဲ ညီတူမျှတူပဲထားရမယ်ဆိုပြီး ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ထုတ်တဲ့ ဥပဒေအကြောင်းတော့ ဟုတ်၏မဟုတ်၏ ကြားလိုက်တာကတော့ အရင် Ooredoo ရဲ့ Package တွေအရမ်းတန်လွန်းတော့ အခြား Operator တွေက စျေးလိုက်မချနိုင်တာကြောင့် တန်းတူပဲ စျေးနှုန်းတစ်ခုအဖြစ်တူတူထားရမယ်ဆိုပြီး ကြားလိုက်မိပါသေးရဲ့။ ကိုယ်တွေလို သူဌေးသားမဟုတ်တဲ့ လူတွေအတွက်ကတော့ အတော်ကို အကြပ်ရိုက်တဲ့ကိစ္စဆိုပေမယ့် အဆင်ပြေစေချင်လို့ လုပ်ပေးတာမဟုတ်ပဲ ပိုက်ဆံတစ်ခုထဲကိုပဲ ကြည့်ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကတော့ အတော်အခက်တွေ့လှတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အင်တာနက်ဆိုတာ၊ စျေးပေါရမယ် တစ်လကို ၃ သောင်း ကြိုက်တာ သုံး ကြိုက်ရာ ဒေါင်းဆိုပြီးပဲဖြစ်သင့်တယ်လို့မြင်မိတယ်။ တော်တော်များများအတွက်လဲ အဆင်ပြေသွားနိုင်သလို အရာရာကလဲ ပြောင်းလဲပြီး လူတော်တော်များများအတွက်လဲ ဗဟုသုတတွေ ရသတွေ ပိုပြီးခံစားရမယ်လို့မြင်မိတယ်။ ၃ သောင်းဆိုတာ သူဌေးတွေအတွက် ကိစ္စမရှိပေမယ့် အခြေခံလူတန်းစားဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ မနက်ဖြန် ဟင်းအတွက် အဆင်ပြေပါ့မလား ရင်ပူရတဲ့လူတွေအတွက်တော့ မတတ်သာဘူးလို့ထင်မိပါရဲ့လေ။ မင်းတို့သုံးချင်သုံးမသုံးချင်နေ I don’t Fucking Care ဆိုတဲ့လူတွေလက်ထဲ အာဏာရှိနေလေတော့လဲ “သည်းခံ”က လွဲ ဘာများတတ်နိုင်မှာမို့လဲ 🙂
Fastboot Firmware Mi Devices